SUDAN: Militariga awooda la wareegay oo qaaday Bandowgii • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / SUDAN: Militariga awooda la wareegay oo qaaday Bandowgii
SUDAN: Militariga awooda la wareegay oo qaaday Bandowgii
April 13, 2019 - By: Axmed Muuse
Golaha Militariga Sudan ee la wareegay awooda xukuumada Sudan ayaa sheegay inay qaadeen bandowgii lagu soo rogay magaalooyinka waaweyn.
Ergo ka socota kooxaha shacabka ee soo qaban qaabiyey banaanbaxyadii bilihii lasoo dhaafay dalkaasi ka socday ayaa maanta oo Sabti ah kulan la yeeshay Golaha Militariga.
Jeneraal Awad Ibn Auf
Shacabka ayaa ku guuleystay inay ku cadaadiyeen Madaxweyne Cumar Al Bashiir oo sodon sano dalkaasi kasoo talinayey inuu xilka ka dego, waxay sidoo kale banaanbaxayaasha diideen inuu xilka la wareego Wasiirka Gaashaandhiga Sudan Jeneraal Awad Ibn Auf.
Jeneraal Awad Ibn Auf oo asagu kamid ahaa raggii sida weyn ulla soo shaqeeyey Cumar Al Bashiir ayaa habeenimadii Jimcaha sheegay inuu xilka ka degayo, wuxuuna awooda ku wareejiyey Gen.Abdel Fattah al-Burhan.
Golahan Militariga ee uu hogaamin doono Abdel Fattah al-Burhan ayaa sheegay inay xilka ugu badnaan heyn doonaan muddo 2 sano ah kadibna awooda ku wareejin doonaa xukuumada shibil ah.
Inta badan shacabka Sudan ayaa u muuqda inay diyaar u yihiin inay la gorgortamaan hogaanka cusub ee militariga, walow ay jiraan qaar kamid ah shacabka oo codsanaya in wakhti kooban ay awooda ku wareejiyaan militariga.
Qaadista bandowga saarnaa magaalooyinka waaweyn ayaa timid kadib shirkii ay maanta yeesheen xubnaha ka socda shacabka iyo Golaha Militariga, waxaa sidoo kale muuqata in shacabkii banaanbaxa ka waday Khartuum intooda badan ay hada baneeyeen fagaarayaashii caasimada oo ay mudaharaadka ka wadeen todobaadyadii lasoo dhaafay.
SUDAN: Maxkamadeynta Madaxweynihii hore Cumar Al Bashiir